Afka kaarka SD wuxuu dib ugu noqon karaa MacBook Pro | Waxaan ka socdaa mac
Waxay umuuqataa in waxa la dhaho waxwalba oo noloshani waa wareeg ay rumoobeen. Waxay u muuqataa in wax walba ay dib ugu laabanayaan sidii ay ku bilaabmeen. Dhowr maalmood ka hor falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegay xaqiiqda ah in Apple laga yaabo inuu fekerayo inaad mar kale u isticmaasho xeedho MagSafe ah ee loogu talagalay 'MacBook Pro', waxtarkiisa iyo awooddiisu waxay umuuqdaan kuwa seegay. Hadda waxaan ogaanay in sida ay saadaaliyeen shaqaalaha Bloomberg, Apple ayaa dib u dhex galin kara kaarka SD-ka.
My MacBook Pro 2013 wuxuu leeyahay kaarka SD-ka. Waa wax aan jeclahay oo aad ii caawiya. Taageerayaasha sawir qaadista aniga oo kale ayaa sawirada si toos ah ugu gudbin kara kumbuyuutarka. Waxay umuuqataa wax yar, laakiin waa wax go'aansaday inaan wali la badalin qaabka. Taasi iyo taasi wali wey ii shaqeysaa aniga. Ming-Chi Kuo, Falanqeeyaha caanka ah ee Apple, ayaa sheegatay in moodooyinka cusub ee 14-inch iyo 16-inch ee MacBook Pro ah Waxaa loo maleynayaa in la arki doono sanadkan waxay soo bandhigi doonaan dekedo badan oo kala duwan marka lagu daro dekedaha USB-C hadda.
Ogeysiiskan ama saadaasha waxaa ku soo biiray Mark Gurman oo ka tirsan Bloomberg isagoo sheegaya in moodooyinka soo socdaa ay yeelan doonaan akhristaha kaarka SD.
MacBook Pro soo socda ayaa tusaale u ah Apple oo diirada saarey cusboonaysiinta macaamiisha Mac qorsheyneysa inay soo celiso booska kaarka SD loogu talagalay soo-saarka MacBook-ga soo socda si dadka isticmaala ay u gelin karaan kaararka xusuusta kamaradda dijitaalka ah. Muuqaalkaas ayaa laga saaray 2016, si ay uga nixiso sawir qaadayaasha xirfadleyda ah iyo abuureyaasha fiidiyowga, qeybaha muhiimka ah ee saldhigga isticmaalaha MacBook Pro.
Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii la cusbooneysiin lahaa MacBook Pro haddii xantaasi run noqoto. 16-inch MacBook Pro leh M1 iyo booska kaarka SD. Isku dhaf wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Afka kaarka SD wuxuu dib ugu noqon karaa barnaamijka 'MacBook Pro'
Waxaa jira nooc qoraal ah cinwaanka maqaalka. Tirada falka iyo mawduuca iskumarin ...
Aad baad ugu mahadsantahay digniinta